Blata mini ကို Moto | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35121)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10993)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9534)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8587)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8071)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7207)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7112)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6202)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5766)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5608)
နေအိမ် → စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော → Blata mini motos
20 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Blata mini ကို Moto
Blata – ရွက်ပေါက်ကြယ်များအဘို့အတောက်ပစက်ဘီး.
သင်ရှိသည် blata mini ကို Moto အဘယ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်., engines vary to up to 13HP and you can speed along at 50mph on some makes.
They have2လေဖြတ်ခြင်း, 1 cylinder engines, withapull start and auto clutch. Made from light alloy with front and rear disk brakes, and boy will you need them.
With justaWeight of 25 ကီလိုဂရမ် (55 lb), they are super fast and super light, but blata also do much more too!
A five speed transmission, front hydraulic fork, rear swingarm with shock absorber andaroad legal light set ( however check your country of origin to see if this light set is legal for you). The whole package is in the region of 110 ကီလိုဂရမ်, now thats good.
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Dick Hammer Grease n Gasoline
ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး AN 650 Bajaj Discover Ducati 60 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Diavel သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Brammo Enertia Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စမတ် eScooter တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက်